यी ३ राशी भएका युवतीहरुसँग भुलेर पनि प्रेम नगर्नुस् ! छिट्टै धोका दिन्छन् – Medianp
यी ३ राशी भएका युवतीहरुसँग भुलेर पनि प्रेम नगर्नुस् ! छिट्टै धोका दिन्छन्
Media NPप्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २५, २०७५१५:३४0
काठमाडौ । अहिलेको समयमा युवायुवती प्रेममा पर्ने कुरा सामान्य नै भइसकेको छ । त्यसैले धेरै युवायुवतीको सोचाई प्रेममा परिसकेपछि जीवनभरलाई होस भन्ने हुन्छ । तर प्रेममा नजिकैदै जादा विभिन्न कुराहरु मिल्दैन् । त्यसपछि सम्बन्धमा चिसोपना आएर सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ । तर ज्योतिशी शास्त्रका अनुसार प्रेमसम्बन्ध लामो समयसम्म टिक्ने वा नटिक्ने कुरा राशीहरुले पनि प्रभाव पार्ने बताउछन् । त्यसैले विचार गर्नुस् , युवाहरुले ३ राशी भएका युवतीसँग भुलेर पनि सम्बन्ध नगाँस्नुस । कुन कुन हो ?हेर्नुस्
यदि भविष्यको राम्रो कल्पना गर्ने युवाहरुले मेष राशी हुनेहरुसँग सम्बन्ध गाँस्नुहुदैन् । किनभने यो राशी भएका युवतीहरु फरक चाहनाको भएकाले समयसँगै बदलिने स्वभावका हुन्छन् । जसले कहिले छोड्ने भन्ने भर हुदैन् ।
कन्या राशी हुने युवतीहरु पनि धेरै जिद्दी र आफ्नो मर्जी चलाउन खोज्ने घमण्डीको स्वभावको हुन्छन् । त्यसैले युवाहरुले ध्यान पुयाएर मात्र सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्छ । किनभने जिद्दी बानी भएकाले रिसको बेला सम्बन्ध तोडेर हिड्न सक्छन् ।
यो राशी भएका यु्वतीहरुको पनि माथिका दुवै राशीसँग केही गुण मिल्छ । किनभने यो राशी भएकाहरु युवतीहरु पनि आफ्नो इच्छा पुर्ति गर्नको लागी राम्रो अवसर भेटे भने जस्तो सम्बन्ध पनि तोड्न सक्छन् । त्यसैले विचार गर्नुस् ।
भारी हिमपातले हवाई सेवा बन्द
सावधान ! दाह्री पाल्ने व्यक्तिमा भुस्या कुकुरमा भन्दा धेरै किटाणु, जान्नुहोस् यसो भन्छन् विज्ञ
बकलोल दिमागबाट निस्कन्छन् यस्ता जुक्ती ? हेर्नुहोस् हाँसो लाग्ने केही तस्विर
विश्वकै सबैभन्दा कम तौलको स्याउ जस्तै आकारको जन्मियो बच्चा, अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्ने तयारी